» नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न पुनः आवेदन माग
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न पुनः आवेदन माग
२०७८ पुष १५,बिहीबार १६:१६
काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नको लागि पुनः आवेदन माग गरेको छ । बोडले अध्यक्ष नियुक्तिको लागि गठन भएको सिफारीस समितिले आज एक सूचना जारी गरी पुनः आवेदन माग गरेको हो ।
यसअघिको आवेदन रद्द भएकाले पुरानाहरुले पुनः आवेदन दिन पर्ने समितिले जनाएको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले समिति बनाएको र सो समितिमाथि कानुनी प्रश्न उठेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्को समिति बनाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार, हाल बनेको समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी र विज्ञ सदस्यको रुपमा डा. जीवनाथ धिताल रहेका छन् ।
यस अघिको समितिमा विज्ञ सदस्यको रुपमा प्रा. डा. नारायण पौडेल रहेका थिए । समितिले १५ दिन अर्थात् पुस २९ गतेभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । साथै यसअघि आवेदन दिएकाले पनि नयाँ सूचना अनुसार फेरी आवेदन दिनुपर्ने भएको छ ।
अघि अघि आवेदन दिएकाले आवेदन फिर्ता लिन चाहेमा १५ दिन भित्र आवेदन दिएर फिर्ता गर्न सकिने र आवेदन फिर्ता गर्दा राजस्व पनि फिर्ता हुने अर्थ समितिले जनाएको छ । समितिले अध्यक्ष नियुक्ति गर्नको लागि योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने छ । ति मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने ब्यबस्था रहेको छ ।
आईपीओ निष्कासनका लागि २८ वटा कम्पनीको आवेदन
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको लागि ११ जनाको आवेदन
सरकारद्वारा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगाना बर्खास्त
चन्द्र ढकाल धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिमा नबस्ने
एकैदिन ४८ अंकले घट्यो नेप्से
ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ बजेट ल्याउने
धितो बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयको तीन दिने अल्टिमेटम
ब्रोकर नियमावली संशोधनको अन्तिम तयारी
आईपीओ निष्काशनका लागि तीन कम्पनीद्वारा निवेदन दर्ता